ဆွေးနွေးချက်:စဉ့်အိုးတန်းကွမ်ယင်မယ်တော်ကျောင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
Is this Kheng Hock Keong (ခိန့်ဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း) at the corner of Sint Odan St or Guanyin Gumiao Temple at the corner of Latha St.? ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၅:၄၂၊ ၁ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
ကွမ်ယင်‌ဘုရားကျောင်း ဘယ်နှကျောင်း ရှိလဲတော့ မသိဘူး၊ လသာလမ်းမှာတော့ ကွမ်ယင်ဘုရားကျောင်း ရှိတာ သိတယ်၊ လသာအတွက် စာအုပ်ထဲက အတိုင်း တင်လိုက်ပါတယ်၊ GuanYin Gumiao Templeပါပဲ။ ရန်ကုန်မှာ နေတဲ့သူ ဆိုရင် ဝေဖန် အကြံပြု ပေးပါဦး။ မှားသွားရင်လည်း ပြန်ဖျက်ပစ်လိုက်ကြပါ။ :) ဆန်လုံးတီး (ဆွေးနွေး) ၀၁:၂၆၊ ၂ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
ခိန့်ဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း နဲ့တူတူပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ၁၈၆၁ စဆောက်တာတူတယ်။ ပြီးတဲ့ခုနှစ်ကတော့ ၁၈၆၃/၁၈၆၄ နှစ်မျိုးကွဲနေတယ်။ ကွမ်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း က Guanyin Gumiao Temple ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၁၈၅၅ မှာ မီးလောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတူနေတယ်။ ပြန်ဆောက်တဲ့ခုနှစ်အနည်းငယ်ကွဲပြီး ၁၈၇၂ မှာ တိုးချဲ့တယ်ဆိုတာ တူတူပဲ။ Ninja✮Strikers «☎» ၀၂:၃၄၊ ၂ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
ဟုတ်၊ ခိန့်ဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းပဲ ထင်ပါတယ်။ en.wiki မှာက ကွမ်ရင်ဘုရားကျောင်း မဟုတ်ပဲ Mazu ကျောင်းဆိုတော့ မသေချာလို့ပါ။ Merge လုပ်သင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ကိုဆန်လုံးတီးရေ၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်းက ကျောင်းကို ရောက်တုန်းက အဲဒါ ကွမ်ရင်ကျောင်းလား၊ Mazu ကျောင်းလား ဘယ်လို တွေ့ခဲ့လဲ။ Thank you. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၃:၅၀၊ ၂ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
ဟုတ်၊ လသာကွမ်ယင်ကျောင်းနှင့် ခိန့်‌ဟုတ် အပြင် နောက်ထပ် ကွမ်ယင် ကျောင်း ရှိသေးလားလို့၊ မရှိဘူးဆိုရင် ပေါင်းစပ်သင့်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ ခိန့်ဟုတ်က နတ်ကွန်းပါ၊ ကိုးကွယ်တာက ပင်လယ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရေနတ်သမီး မားကျူ ကျောင်းပါ၊ ကွမ်ယင်ရုပ်တုတော့ မတွေ့မိဘူး။ စာအုပ်ထဲမှာ စဉ့်အိုးတန်း ကွမ်ယင်မယ်တော်ကျောင်းလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတော့ အဲအတိုင်း တင်လိုက်တာပါ၊ ခိန့်ဟုတ်လားလည်း မသိဘူး၊ နာမယ်လည်း မပါဘူး။ စဉ့်အိုးတန်းလမ်းမှာ အဲတကျောင်းပဲ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ပေါင်းစပ်လိုက်ပါ၊ အကြံပြုပါတယ်။ စဉ့်အိုးတန်းကွမ်ယင်မယ်တော်ကျောင်းကို ဖျက်ဖို့ လိုတယ်။ ခိန့်ဟုတ်ကိုပဲ အတည်ယူလိုက်ပါ။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ --ဆန်လုံးတီး (ဆွေးနွေး) ၀၈:၀၈၊ ၂ ဇွန် ၂၀၁၇ (UTC)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆွေးနွေးချက်:စဉ့်အိုးတန်းကွမ်ယင်မယ်တော်ကျောင်း&oldid=374459" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၇၊ ၁၄:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။